स्पाइडर-jewel - हावा लक मालिक
सानो तर - स्पाइडर-jewel विषालु माकुरा, को जलीय वातावरण बस्ने। सबैभन्दा arachnids अपवाद को समान प्रकारको भूमि लाइभ। 1.2 1.5 सेमी, 8 खुट्टा, पेट, cephalothorax, जबड़े दुई जोडी र 8 आँखाको शरीर लम्बाइ - कि कसरी माकुरा silverfish छ। विवरण अन्य spiders धेरै समान छ, तर त्यहाँ र विशेष कुरा छ - आफ्नो abdomens मा hairs को एक विशाल संख्या, greased पनरोक सामाग्री, तिनीहरूले हावा राख्न रूपमा Serebryanka पानी सास फेर्न मदत।
सबैभन्दा serebryanok herbaceous वनस्पति संग ताजा स्थिर पानी मा युरोप मा फेला परेन। स्पाइडर पानी अन्तर्गत बसोबास, र त्यहाँ एक घर निर्माण गरिएको छ। उसले जो पछि हावा संग भरिन्छ जाल weaves। पछि यो एक घण्टी आकार प्राप्त। आफ्नो घर माकुरा silverfish एक रोडा, एक बोट वा मार्न प्रदान। Breathes हावा को रेशमको कोयो मा आर्थिक खपत गरिन्छ ताकि माकुरा, मात्र होइन ज्योति, तर पनि सम्पूर्ण सतह छ।
हावा आपूर्ति Replenish गर्न, माकुरा पानी सतहमा खडा छ। खैर, यो लगभग2सेमी / सेकेन्ड को दर मा, बरु चाँडै नाउहरु। को भुँडी को सतह मात्र protrudes मा, शरीर बाँकी पानी छ। यो बिन्दुमा, silverfish पूर्ण defenseless, त्यसैले म ध्यान आकर्षित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। फेफडे र कपाल मा हावा को टाइप उहाँले पानी आफ्नो घण्टी त्यहाँ आफ्नो हावा आपूर्ति रिसेट गर्न dives। को भुँडी मा बाल सकेसम्म धेरै हावा सँगै टाँसिएको छैन र कब्जा गर्न, silverfish कहिले काँही combing र तिनीहरूलाई बोल्ड गोप्य विनियोजन मुख lubricates।
हुनत स्पाइडर-jewel र उहाँले धेरै खराब देख्नुहुन्छ, 8 आँखा छ, तर उहाँले tremors र आन्दोलन को पर्याप्त धारणा विकास भएको छ। सबै जस्तै भएको माकुरा को प्रतिनिधिहरु, आफ्नो रेशमको कोयो रेशा देखि silverfish बिरुवाहरु, ड्रिफ्टहुड र चट्टानहरू बन्द गर्न संकेत विस्तार, त्यसैले उहाँले तुरुन्तै कसैले आफ्नो वेब छोयो कि महसुस। एक मिनेट बर्बाद बिना माकुरा तुरुन्तै सिकार पक्रेको छ कि छैन जाँच गर्न चल्छ। Serebryanka खुसीसाथ माछा भुट्नु, कीरा लार्वा र क्रसटेशियन, खाने ज्यादातर राति hunts।
शिकार माकुरा silverfish घंटी खींचती, र त्यसपछि जारी नरम तन्तु पाचन निकासी इन्जाइमहरु फिर्ता पर्छ। पचाउन सकेन भनेर सबै को माकुरा बस रेशमको कोयो बाहिर फेंकता। को पुरुषहरु अलिकति महिलाहरुको भन्दा ठूलो भएकोले तिनीहरूले खाएको गरिने बाँच्न सक्दैन, र नजिकका बसोबास गर्छन्। संभोग एक रेशमको कोयो महिला मा शान्तिमा र सधैं एकदम हुन्छ।
अण्डा लागि रेशमको कोयो पुनर्गठन गरेर तपाईँले आवश्यक भन्दा, वास्तवमा, silverfish संग गर्नुहुन्छ तुरुन्तै, मल सुरु गर्न। स्पाइडर सामान्यतया 10 160 गर्न अन्डा कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग पार्छ। महिला अण्डा incubates, जबसम्म यस्तो समय रूपमा सानो spiders को रेशमको कोयो छोड्न हुनेछ, यो उहाँलाई बाहिर आउँछन् र केहि खान थिएन। युवा spiders पानी नै शरीर मा बसोबास गर्न, वा आफूलाई को वेब Weave गर्छन, र हावा द्वारा पानी को अर्को निकाय सार्दै हुनुहुन्छ।
Silverfish जीवन लगभग 18 महिना छ। को हिउँदमा लगभग एक जवान spiders र साना पुरानो महिलाहरुको छन्। न्यानो राख्न, तिनीहरूले खाली खोल, वेब entwine जो, वा बाक्लो काँच समान ठूलो को एक रेशमको कोयो Weave खोजिरहेका छन्। पनि चरम चिसो silverfish राम्रो बोक्न।
को ऊंचाई के छ?
वन्यजन्तु: ठूलो लामखुट्टे कसरी?
Astragalus - अमरता को जडिबुटी
कोट को मिश्र को हथियार: फोटो, वर्णन, मूल्य
ग्रीस शहर: प्राचीन को अद्भुत वातावरण मा सर को बल प्रवेश
देश र दक्षिण अमेरिका को क्षेत्र। महाद्वीप को पर्यटक स्रोतहरू
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर: कार्य को सिद्धान्त
5 सजिलो तरिका प्राकृतिक ईेशनर बनाउन
सूर्य एलर्जी उपचार गर्न भन्दा, बुझ्न
कुनै पनि समस्या बिना सीएस जाओ मा फन्ट परिवर्तन गर्न?
रंगका प्रसिद्ध प्यालेट "म्याट्रिक्स"
सम्पत्ति परिसंचारी प्रयोग को दक्षता। को गुणांकहरूको को आर्थिक सार
उपलब्धि भाग अन्तर्गत रोपण shrubs